Showing १११-१२० of १,११७ items.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कान्छो भाइ रबर्ट ट्रम्पकाे मृत्यु
ब्लाष्टखबर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कान्छो भाइ रबर्ट ट्रम्प शनिबार राति न्यु योर्ककाे एक अस्पतालमा मृत्यु भएकाे छ । भाइकाे मृत्युबारे स्पस्ट पार्दै ट्रम्पले एक विज्ञप्ती मार्फत श्रद्धांजली अर्पण गरेका बिबिसी बल्डले जनाएकाे छ । ७१ वर्षीय रोबर्ट एक व्यापारीको रूपमा चिनिन्थे। गम्भीर बिरामी भएको कारण उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । शुक्रबार मात्रै आफ्ना विरामी भाइलाई भेट्न अस्पताल गएका ट्रम्पले विज्ञप्तिमा रबर्ट भाइमात्र नभएर आत्मिय साथी समेत रहकाे बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीबीच फोनवार्ता
धरान/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार भारतको ७४ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा फोनवार्ता भएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादसँगै लामो समय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच संवाद भएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीको छिमेक प्राथमिकता नीतिको प्रशंसा गर्दै सार्थक द्विपक्षीय सहयोगका लागि नेपाल तत्पर रहेको बताएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा ब
४३० पटक पढिएको
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६२ हजार संक्रमित थपिए
धरान / भारतामा पछिल्लो २४ घण्टामा झण्डै एक हजारको ज्यान गएको छ । कोराना भाइरसका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ६२ हजारमा संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिवारसम्ममा ४९ हजार १४८ जनाको ज्यान गएको छ ।२५ लाख २७ हजार ३०८ जना संक्रमित रहेकाे इण्डिया टुडेले जनाएकाे छ । यो संख्या विश्वको संक्रमित देशमा तेश्रो हो । पहिलो अमेरिकामा ५४ लाख ७६ हजार बढि संक्रमित छन् । दोश्रोमा बजिल ३२ लाख ७८ हजार भन्दा बढि संक्रमित रहेका छन् ।
भारतमा काेराेना संक्रमितकाे नयाँ रेकर्ड
ब्लाष्टखबर । भारतमा पछिल्लाे २४ घण्टमा हाल सम्मकै अधिक काेराेना संक्रमित फेला परेका छ । भारतीय अनलाइन समचार संस्था द वायरका अनुसार पछिल्लाे २४ घण्टामा ६६ हजार ९ सय ९९ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । याे संगै भारतमा संक्रमित हुनेकाे संख्या २३ लाख ९६ हजार ६ सय ३७ पुगेकाे छ । पछिल्लाे २४ घण्टामा भारतमा ९ सय ४२ जना काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु भएकाे छ । हाल सम्म मृत्यु हुनेकाे संख्या ४७ हजार ३३ पुगेकाे छ ।
बेगलुरमा एक फेसबुक पाेष्टलाई लिएर आक्रमण हुदाँ ३ जनाकाे मृत्यु ६० बढि घाइते
ब्लाष्टखबर । भारतकाे बेगलुर स्थित पुलकेशमा मंगलबार राति करिब हजार जनाको भीडले कग्रेस विधायकको घरमा हमला गर्नुका साथै एक प्रहरी चाैकीमा ताेडफाेड गर्दा ३ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने ६० जना घाइते भएकाे त्यहाँ राष्ट्रिय समचार एजेन्सीले जनाएकाे छ । विधायका भतिजाले गरेकाे एक फेसबुक पाेष्टलाई लिएर भएकाे आक्रमणकारीले विधायकको घरमा हमला गर्दा थुप्राे भैतिक क्षती भएकाे बताइएकाे छ । भिडलाई नियन्त्रण गर्न खेज्दाँ प्रहरी माथी समेत अक्रमण भएकाे र प्रहरी चाैकी तथा सबारी साधनमा गाजनी समेत गरेकाे हुदाँ प्रहरीका करीब १० वटा सवारी साधन जलेर नष्ट भएकाे समाचारमा उल्लेख गरीएकाे । उक्त फे
प्रकाशित मितिः श्रावण २८, २०७७
रूसले काेराेना विरूद्धकाे संसारको पहिलो खोप बनाएकाे पुतिनकाे दावी, छोरीलाई दिइयो खोप
ब्लाष्टखबर । रसियाले काेराेना विरूद्धकाे पहिलाे खाेप बनाएकाे राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिनले घाेषणा गरेका छन् । उनले रूसकाे स्वास्थ मन्त्रालयले स्विकृत दिएकाे जानकारी गराउँदै उक्त खाेप विश्वकाे पहिलाे काेराेना विरूद्धकाे सफल खाेप रहेकाे दावा पनि गरेका छन् । पुतिनले आफ्नी छोरीले पनि उक्त खोप लगाई सकेकाे र निकै प्रभावकारी देखिएकाे बताएकाे एएफपी न्युज एजेन्सीले बताएकाे छ । मस्को स्थित गमल्या इन्स्टिच्यूटले तयार गरेकाे बताइकाे उक्त खाेप मंगलबारकाे रूसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्विकृती दिदै सफल खाेप रहेकाे बताएकाे छ । आरटीडटकमका अनुसार पुतिनले रसियामा खाेपकाे छिट्टैनै ठूलाे मात्र
के विश्वले महामारी विरुद्धको युद्ध जित्दैछ त ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले नयाँ प्रकृतिको भाइरसका कारण विश्वव्यापी महामारी फैलिएको घोषणा गरेको छ महिनाभन्दा केही बढी समय भएको छ। ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यको संसारभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०,००० पुगेको थियो र २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको थियो। तीमध्ये कोही पनि बिरामीहरू चीन बाहिरका थिएनन् । त्यो बेलादेखि संसार र हाम्रो जिन्दगी नै पूर्ण रूपमा परिवर्तित हुन पुगेको छ। मानवजाति र कोरोनाभाइरसबीचको यो युद्धको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ तर समग्र पृथ्वीलाई लिएर हेर्ने हो भने दृश्य सुन्दर देखिँदैन। एक करोड नब्बे लाखभन्दा बढी मानिसहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र सात ल
धरान/ हङ्कङमा कट्टर लोकतन्त्रका पक्षधर मिडिया मालिक पक्राउ परेका छन् । साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार बेइजिङले हालै जारी गरेको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत जिमी लाइलाई पक्राउ गरिएको हो । उनले प्रकाशन गर्दै आएको एप्पल डेलीमा प्रहरीले छापा मारेर उनलाई भने आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ । पत्रिकाको कार्यालयमा छापा मारेर उनका दुई छोरा तथा मिडियामा सम्बद्ध ४ जना अधिकारीसहित ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । जेठा छोरा ४२ वर्षीय तिमोथी लाइ र ३९ वर्षीय लान लाइलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । तर पत्रकारहरूलाई भने पक्राउ गरिएको छैन । उक्त पत्रिकालाई लोकतन्त्रको पक्षधर रहेको बताइन्छ । पत्रि
एजेन्सी / यूकेमा एउटा लिलाम कम्पनीले महात्मा गान्धीले प्रयोग गरेको चस्मा आफूले फेला पारेको जनाएको छ। ईस्ट ब्रिस्टल अक्शन्सका एन्ड्रू स्टोका अनुसार गान्धीको चस्मा १५,००० पाउन्डमा बिक्री हुने अपेक्षा छन्। आफ्नो कम्पनीको इतिहासमा उक्त चस्मा महत्त्वपूर्ण वस्तु भएको उनले बताए। उक्त चस्माको मूल्य बताइँदा त्यसको स्वामित्व भएका व्यक्ति झन्डै मुर्छा परेको उनले बताए।“कसैले हाम्रो पत्रमञ्जूषामा शुक्रवार राति त्यो हालिदियो र सोमवारसम्म यो त्यहीँ झुन्डिराख्यो,” उनले भने। “हाम्रा एक कर्मचारीले मलाई त्यो दिँदै त्यसमा गान्धीको चस्मा उल्लेख गरिएको एउटा टिपोट भएको बताए।”